नेकपामा नातावादको समाजशास्त्र, क्रान्तिकारी धङधङी
- जेविन सर्वहारा
हिजो मृगौलाको डायालेसिस नसकिँदै धमाधम पार्टीको र मन्त्रीपरिषदको ब्याक टु ब्याक बैठक बोलाउँदा लाग्यो प्रधानमन्त्री ठुलै धपेडि र तनाबमा छन् । लाग्यो उनलाई कामको तृष्णा छ । स्वास्थ स्थितिले गर्दा प्रशासनिक काम उल्झिरहेछन् । मिल्खा शैलिमा मेडिकल काउन्सिल अध्यक्षमा भगवान कोईरालाको नियुक्ति, त्रि. वि उपकुलपतिमा धर्मदत्त बास्कोटाको नियुक्ति, सातै प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती, पार्टीका तर्फबाट उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट अनि ईत्यादि । तर प्रधानमन्त्रीको धोती त्यतिबेला खुस्कियो जब हरेक नियुक्तिमा नातावादले प्रश्रय पाएको भेटियो ।
के महिलाको मुक्ति र शासकिय पदमा उदय श्रीमानको मृत्युु भएपछि मात्र हुने हो ? कि विद्या भट्टराई र बिमला वलि अपवाद हुन् ? के भक्तपुरका दिवंगत हरिशरण लामिछानेकि श्रीमती माननीय पदका लागि लायक थिईनन् ? या धरानको मेयरको लागि जनजातीकि थेप्चे नाक भएकी पत्नीलाई ब्राह्मण मस्तिस्क ले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीको यो धपेडिभित्रको समाजशास्त्र अझ गहिरो पनि छ, हाेइन भने सर्वथा विवादित व्यक्तिहरु किन राजकिय पदमा जोडिईरहन्छन्, मार्सि चामललाई प्रचारमा ल्याउने कसैकसैले मेडिकल माफिया भनेर चिन्ने दुर्गा प्रसाईका दाजु विष्णु प्रसाईं प्रदेश प्रमुखमा सिफारिश हुनु पनि संसयको कुरा हो ।
हरेक पद प्रधानमन्त्रीलाई किन झापाकै मान्छेलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, अझ दमक-बिर्तामोड कै अझ दुर्गा प्रसाईकै ? नेपथ्यमा त नवनियुक्त उपकुलपति राष्ट्रपतिकै भान्जा हुन भन्ने सुनिन्छ । प्रचण्डका त नातागोता छाडेर घरमा रुद्रि लाईदिने पण्डित पनि राजकिय पदमै छन् । नेकपा यो परिवारवादको आहालबाट कहिले निस्किन्छ ? हाेइन, उनिहरु कट्टर क्रान्तिकारी हुन भन्ने कमरेडलाई लाग्छ भने माक्र्सवादका एकदुईवटा क्लास लिन पाईयोस ।
दुनियाँ यत्ती असमान छ कि- न गाली गरेर समान हुन्छ, न स्तुतिगान गरेर सप्रिन्छ । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक भ्रमहरुबाट रुपान्तरण जरुरी छ । तर भ्रमकै खेती, भ्रमका खेताला र भ्रमको आरती गरी बस्ने हो भने यो जुनिको उपलब्धी नागरिकता पाउनु मात्रै हुने त होला । नियम फेरिएको खेल हेरेर जानु छ । यो खेल सँग को वाक्क भएकाे छैन र ?